အိမ်မက်အရ ထီထိုးရာမှ မြန်မာငွေသိန်း ၇၅၀ တန်ဖိုးရှိ မလေးရှားထီဆုကြီးကို မြန်မာအလုပ်သမားတစ်ဦးဆွတ်ခူး – CharTake
အိမ်မက်အရထီထိုးရာမှ မြန်မာငွေသိန်း ၇၅၀ တန်ဖိုးရှိ မလေးရှားထီဆုကြီးကို မြန်မာအလုပ်သမားတစ်ဦး ဆွတ်ခူး
မလေးရှားနိုင်ငံ KL ဘလက်ကောင်းနေ မောင်သက်မင်းထွန်းသည် အိပ်မက်အရ အတိတ်ကောက်ပြီး ၄လုံးထီ ရင်းဂစ် ( ၁၀၀ )ဖိုးထိုးရာ ရင်းဂစ် ( ၂သိန်းခွဲ ) မြန်မာငွေ သိန်း ( ၇၅၀ ) ရရှိခဲ့ ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့အား အကူအညီတောင်းခံသည့်အတွက် သွားရောက်ခေါ်ယူပြီး Toto ဒိုင်တွင် ထုတ်ပေး၍ မြန်မာပြည် မိဘများထံ လွှဲပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
မလေးရောက်တာ တနှစ်ကျော်သာ ရှိသေးပြီး ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့မှ စက်ရုံ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပြန်ခွင့်တောင်းရာ ခွင့်ပြုသည့်အတွက်အခုတော့ အမိမြေ ( ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်,မင်းဂေါင်းမြောက်အုပ်စု , သူဌေးကုန်း ) ရွာသို့ ပြန်ခွင့်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
နှလုံးလှပရဟိတ အသင်း၏ ပရဟိတ လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်လည်း ရင်းဂစ် ( ၁၀၀၀၀ ) ကိုလည်းလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ မလေးရောက် ရွှေမြန်မာများ အားလုံး ကံကောင်းကြပါစေ။ Source ; ( 2.11 . 2020 ) နှလုံးလှပရဟိတ လူငယ်များသွေးလှူရှင်အဖွဲ့( မလေးရှား+ မြန်မာ ) Lovely Heart
Unicode … အိမျမကျအရထီထိုးရာမ မွနျမာငှသေိနျး ၇၅၀ တနျဖိုးရ မလေးရားထီဆုကွီးကို မွနျမာအလုပျသမားတဈဦး ဆှတျခူး
မလေးရးနိုငျငံ KL ဘလကျကောငျးနေ မောငျသကျမငျးထှနျးသညျ အိပျမကျအရ အတိတျကောကျပွီး ၄လုံးထီ ရငျးဂဈ ( ၁၀၀ )ဖိုးထိုးရာ ရငျးဂဈ ( ၂သိနျးခှဲ ) မွနျမာငှေ သိနျး ( ၇၅၀ ) ရရခဲ့ ပါသညျ။
ကြှနျတျောတို့ အဖှဲ့အား အကူအညီတောငျးခံသညျ့အတှကျ သှားရောကျချေါယူပွီး Toto ဒိုငျတှငျ ထုတျပေး၍ မွနျမာပွညျ မိဘမြားထံ လှပေးပွီး ဖွဈပါသညျ။
မလေးရောကျတာ တနဈကြျောသာ ရသေးပွီး ကြှနျတျောတို့ အဖှဲ့မ စကျရုံ တာဝနျရသူမြားနငျ့ ပွနျခှငျ့တောငျးရာ ခှငျ့ပွုသညျ့အတှကျအခုတော့ အမိမွေ ( ကြောကျပနျးတောငျးမွို့နယျ,မငျးဂေါငျးမွောကျအုပျစု , သူဌေးကုနျး ) ရှာသို့ ပွနျခှငျ့ရမညျ ဖွဈပါသညျ။
နလုံးလပရဟိတ အသငျး၏ ပရဟိတ လုပျဆောငျမမြားအတှကျလညျး ရငျးဂဈ ( ၁၀၀၀၀ ) ကိုလညျးလဒါနျးခဲ့ပါသညျ။ မလေးရောကျ ရှမွနျမာမြား အားလုံး ကံကောငျးကွပါစေ။ Source ; ( 2.11 . 2020 ) နလုံးလပရဟိတ လူငယျမြားသှေးလရငျအဖှဲ့( မလေးရး+ မွနျမာ ) Lovely Heart